Indlela aphathe bedsore nendlela yokugwema ivela khona?
Bedsores abizwa ngokuthi umonakalo isikhumba kanye wabonakala ngenxa lezi ukulimala izilonda, okungaba sijule kakhulu nokuthi ngisho ubovu. Ngokuvamile avele abantu ngenxa yanoma yisiphi isizathu abakwazi ukuthutha. Izilonda wabaphulukisa eside kakhulu, kodwa ezithakazelisayo Kuyaphawuleka ukuthi musa ubuhlungu. Labo abanakekela abagulayo kumele ukwazi ukuze kwelashwe bedsore. Kufanele ngokushesha kuqashelwe ukuthi isibalo sabo akuxhomekile nje kuphela esimweni lizinga lekunakekela, kodwa futhi ku nguye indlela abantu nezibi. Iphuzu eliyinhloko liwukuthi siyobe uhlushwa esinzulu ukugula Izilonda izovela kungakhathaliseki ukuthi ezinakekela kodwa bayoba, umuntukazana ogulayo akuyona eqinile, kodwa ukubanakekela ayiyinhle.
ingcindezi isikhathi eside ezindaweni ezithile emzimbeni kungaholela yokuthi kwezicubu ngeke besakwazi ukwenza nomsoco kanye nomoya-mpilo. Futhi kusukela imithwalo unomphela capillary encane kungaba wavele, okuholela ukuvela wegazi ezindaweni lapho kungafanele khona. Ngokuvamile bedsores zenzeka coccyx, amathambo ischial futhi sacrum. Kakhulu kangakanani ngokuvamile ziseZwini entanyeni, izimbambo kanye hip.
Ingozi yokuqala livela kubo Kuyaphawuleka ukuthi izicubu sise ukujula ingahle kulimala ngokubanika isikhathi sakho, njengoba ebusweni isikhumba izovela izimpawu zokuqala ukuthi sekuyisikhathi nomsindo we-alamu. Ngokuvamile, Izilonda ezifana kukhona imbangela amputations. Uma isiguli ekhaya uya unakekele umuntu akazi ukuthi ukuvimbela kanye nendlela yokuphatha decubitus, kuyodingeka ukuchitha isikhathi esiningi sokulungisa lezi zinkinga, njengoba izinkinga zifike ngokungalindelekile.
A amazwi ambalwa mayelana lokuvikela
Isiguli kudingeka amandla futhi, ngakho-ke kumelwe abe ukudla okuhle futhi olinganiselayo. Nsuku zonke anakho ukuthatha ukudla okunempilo kuphela, kanye izithelo, imifino kanye nakho konke okunye okwaziyo amasosha omzimba ayo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi esimweni ematfuba okuvela bedsores isidingo isiguli sidle ukudla okuningi nge wokuqukethwe lelisetulu amaprotheni (inyama, inhlanzi, njll).
Asikwazi ukuvumela ukuthi lesi siguli endaweni efanayo ngaphezu kwamahora amathathu. isidingo sakhe ukuba njalo flip, futhi ngaso sonke isikhathi hlola izindawo lapho wayesanda nikubeke ezinhliziyweni zenu. Isiguli kufanele ngempela sisekelwe kuphela kwi omatilasi soft kakhulu futhi ukhululekile nelineni, okuyinto ubekwa, akufanele ube creases.
Ingase futhi ahlanze ngotshwala noma nganoma iyiphi indlela ekhethekile ukuze kuvikelwe isikhumba indoda izimele. Ukwenza lokhu kunconywa kathathu noma kane ngosuku.
Indlela esiphatha ngayo decubitus
Njengoba kushiwo ngenhla, kungcono ukugwema kubo, kodwa ukwenza kanjalo akulula. Endabeni ukuthola kufanele kuthathwe izinyathelo ngokushesha.
Ukukhuluma ngokuthi indlela yokuphatha decubitus, udinga ukuba banake yokuthi inhloso akukhona kuphela ukunqanda ukubhebhetheka kwazo olunye, kodwa futhi nokubuyiselwa endaweni ezilimele. ukuphathwa endawo bedsore kuvame sehliselwe isikhala egeza ekhemisi nesineke ejenti (isib i-hydrogen peroxide). Ukwelashwa okufanele kwenziwe okungenani kabili ngosuku. Ngezinye izikhathi ukwenza ngaphandle kusaladi ekhethekile.
Ebala imishikashika okuthile kunalokho ekwelapheni ingcindezi izilonda, kufanele ukhulume futhi compounds amagciwane, kanye antiseptics. Kuyinto engenakwenzeka hhayi ukuziqhakambisa yokuthi zonke izimali ezisetshenziselwa Kulokhu (amabhandeshi, uhala, njll) kumele oyinyumba njalo.
Akunakusetshenziswa asikwazi usufaka umuntu omusha noma ephulukisa decubitus. Yiqiniso, lapho semali kungabangela ebunzimeni obuthile, kodwa kusadingeka ukuthola indlela ukuyivimbela.
ukwelashwa okungafanele kungabangela ukunqunywa.
Encephalopathy Ibanga 3: Kungakanani uchitha? Encephalopathy: izimpawu, izimpawu, uphethwe, ukuphathwa